အန်ဖက်တမင်း အလွဲသုံးခြင်းဆိုသည်မှာ - Hello Sayarwon
လူတွေ အလွဲသုံးမိနေနိုင်တဲ့ အရာတွေက အတော်များများရှိပါတယ်။ ဒီထဲမှာ အန်ဖက်တမင်းကလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ပေါ့။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ အန်ဖက်တမင်း အလွဲသုံးမှုက အများအပြားတွေ့လာရပါတယ် အထူးသဖြင့်တော့ လူငယ်တွေကြားမှာပေါ့။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ အန်ဖက်တမင်း အလွဲသုံးခြင်းအကြောင်းလေး ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
အန်ဖက်တမင်း (Amphetamine) ဆိုတာက ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ကို လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ အရာပါ။ ဦးနှောက်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြင့်တက်စေဖို့ အသုံးပြုကြသလို ခန္ဓာကိုယ်မှာ အင်အားပြည့်ဝနေစေဖို့၊ အာရုံစူးစိုက်မှု ကောင်းစေဖို့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံ​ကြည်မှု မြင့်မားစေဖို့ ညဘက်မအိပ်ဘဲ နေနိုင်စေဖို့၊ အဆာခံနိုင်စေပြီး ဝိတ်ကျစေဖို့ စတဲ့ အကြောင်းအရင်း အမျိုးမျိုးနဲ့ အသုံးပြုကြပါတယ်။
ဘယ်လို ပုံစံနဲ့ အသုံးပြုကြလဲ……….
အန်ဖတ်တမင်းကို အလွဲသုံးတဲ့ ပုံစံခြင်း မတူနိုင်ပါဘူး။ ဆေးလုံးလိုက် သောက်သူတွေရှိသလို အာနိသင် မြန်မြန် ပြအောင်ဆိုပြီး ဆေးလုံးကိုကြိတ် ရေနဲ့ ဖျော်ပြီး သွေးကြောထဲ ထိုးသွင်း အသုံးပြုတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။
ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး ရှိလား………….
ဆေးဝါးအလွဲသုံးတယ်ဆိုမှတော့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးက ရှိတာပေါ့။ အန်ဖတ်တမင်းက စိတ်ရောကိုယ်ပါ ထိခိုက်စေပါတယ်။
အဆိုးဆုံးကတော့ သေဆုံးသည်အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အန်ဖက်တမင်း သုံးစွဲနေလား။ ဘယ်လို သိနိုင်မလဲ………
အန်ဖတ်တမင်း သုံးစွဲသူမှာ အခုလို လက္ခဏာတွေ တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ အရင်ကနဲ့မတူတဲ့ အမူအကျင့်တွေ ရှိလာတာ
ညဘက်တွေ မအိပ်တာမျိုး တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
ဒီလို လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပြီဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံး ပြသပြီး ကုသမှု ခံယူဖို့ လိုပါမယ်။ အကြောင်းကတော့ အန်ဖတ်တမင်း အလွဲသုံးတာက စောစောသိ စောစောကုသမှု ခံယူနိုင်ရင် ထိရောက်မှု အားကောင်းလို့ပါ။
အန်ဖတ်တမင်း အလွဲသုံးမှုကနေ ဘယ်လို ရုန်းထွက်မလဲ……………
အခြားဆေးစွဲမှုတွေကို ဖြတ်လို့ရသလို အန်ဖက်တမင်းစွဲတာကိုလည်း ဖြတ်လို့ ရပါတယ်။ ဆေးဖြတ်တဲ့နေရာမှာ အဓိက အကျဆုံးက ကိုယ်တိုင်ပါ။ ချက်ချင်းအောင်မြင်ဖို့ကတော့ ခက်ခဲပါတယ်။ဒါကြောင့် ဆေးဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင်နေအိမ်မှာ မဖြတ်ဘဲ ဆေးရုံမှာ ဖြတ်ပါ။
ဒါမှ ဆေးသုံးစွဲမှုကို မလုပ်မိအောင် ရှောင်ကြဉ်နိုင်မှာပါ။ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှုတွေ ခံယူပါ။ မိသားစုဝင်တွေ မိတ်ဆွေတွေက ဆေးဖြတ်နေသူကို နှစ်သိမ့်ပေးပါ။ ဆေးဖြတ်တဲ့အခါ ပေါ်လာနိုင်တဲ့ လက္ခဏာတွေအတွက် ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားတဲ့ ဆေးတွေကို သေချာလေး သောက်သုံးမယ်ဆိုရင် အန်ဖတ်တမင်း အလွဲသုံးမှုကနေ အကောင်းဆုံး ရုန်းထွက်နိုင်မှာပါ။
ညွှန်ကြားချက်တွေကို သေချာ လိုက်နာမယ် စိတ်ကိုလည်း ပြတ်ပြတ်သားသား ထားမယ်ဆိုရင် အန်ဖတ်တမင်း အလွဲသုံးမှုကို အကောင်းဆုံး ကျော်လွှားနိုင်မှာပါ။
What’s An Amphetamine? Addiction: Signs, Symptoms, and Treatment https://americanaddictioncenters.org/amphetamine Accessed Date 24 September 2020
Abuse of Amphetamines and Structural Abnormalities in Brain https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2769923/ Accessed Date 24 September 2020